Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Weerarradii Xarunta Ganacsiga Dunida ee Pentagon
Weerarradii Xarunta Ganacsiga Dunida ee Pentagon
Sebtembar 11, 2001
Subaxnimadii 11-kii Sebtembar, 2001, 19 qof oo ka tirsan argagixisadsa ku lugta leh oo ka tirsan ururka argagixisada al-Qa’ida ayaa afduubey afar ka mid ah dayuuradaha rakaabka qaado. Waxay dayuuradaha oo idil ku sii isocdeen gobolka California, waxayna ka soo kicitimeen seddex ayraboor kala duwan ee ku yaal bariga Mareykanka.
Labadii dayuurado ee ugu horreeyay ee la afduubay waxay ka soo kicitimeen Ayraboorka Caalamiga ah ee Logan ee Boston ku yaal, waxayna ku qarxeen dhismooyinkii ahaa Xarunta Ganacsiga Dunida ee Magaalada New York. Diyuuradihii ku dhacay, iyo dabkii ka kacay gubashada shidaalka, ayaa burbur u geystay dhismooyinka oo gaarsiiyay in ay burburaan.
Dayuurad seddexaad ayaa ka soo dhooftay Dulles Internation Airport, waana la afduubay, waxayna ku dhacday xarunta Pentagon-ka nus saac kaddib markii Xarunta Ganacsiga Dunida ay dayuuraddii labaad ku dhacday. Weerarkaan wuxuu burbur badan gaarsiiyay dhismo culus, waxaana ku wada dhinteen rakaabkii saarnaa iyo 125 qofood oo kale oo dhismaha gudihiisa ku jiray.
Dayuuraddii afaraad waxay ka kacday Garoonka Diyaaradaha ee Newark International Airport waxaana suuragal ah in loogu talagalay in ay ku dhacdo daarta U.S. Capitol ama Aqalka Cad (White House). Hase ahaatee, rakaabkii dayuuradda saarnaa ayaa la dagaalay argagixisada sidii ay dayuuradda ula wareegi lahaayeen. Muwaadiniintan geesiyaashi ahi dartood, ma aysan u suuragelin argagixisada in ay ujeeddadoodii gaaraan waxayna dayuuradda ku qaraxday meel ku dhow Shanksville, Pennsylvania, waxaana ku dhintay dhammaan 40-kii qofood ee saarnaa.
Weerarradii 11-kii Sebtembar, 2001, waxaa ku naf waayey 2,998 oo qofood oo ah muwaadiniin caalamka oo idil ka yimid. Ururka argagixisada al-Qaida ayaa sheegtay in ay ka mas’uul ahaayeen qorshaha iyo fulinta weerarrada, iyadoo uu hoggaamiyahoodii, Usama bin Ladin oo iminka dhintay, uu cajal fidiyow ah ku sheegtay in uu ka mas’uul ahaa weerarrada. Waxay weerarradan ahaayeen kuwii ugu burbur badnaa ee awood dibedda ka timid ay u geysteen dalka Mareykanka tan iyo weerarkii Pearl Harbor ee 1941-kii.
Barnaamijka Abaalmarinta Caddaaladda waxay a lagu bixinayaan abaalmarin gaarayso illaa $25 milyan haddii la helo warbixin suuragelinaysa in caddaalad lagu qaado kuwii ka mas’uulka ahaa weeraradan.
Qof ayaa noo soo gudbiyey macluumaad hor-istaagey weeraro argaggixiso oo is xigxigey 48 saacadood ka hor oo macluumaadkaas wuxuu badbaadiyay boqolaal nafleey.